एन–४०० निवेदन अस्वीकृत भए ३० दिनभित्र अपिल गर्न मिल्छ - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
अमेरिकामा विनाभिसा आएको भनी मलाई सन् २००५ मा जेएफके एयरपोर्टमा पक्राउ गरिएको थियो । वकिलको सहयोगबाट मेरो शरणार्थीको निवेदन स्वीकृत भएको थियो । शरणार्थीको आधारमा नै ग्रीनकार्ड पनि प्राप्त गरें । साथीहरुको मद्दतअनुसार एन–४०० निवेदन आफैंले तयार गरी युएससीआईएसमा पेश गरेको थिएँ । गएको हप्तामा मेरो सिटिजनसिपको अन्तरवार्ता भयो । मेरो अन्तरवार्ता लिने अफिसरले अंग्रेजी, इतिहास र अमेरिकी सरकारसम्बन्धी पास गरे भन्यो । तर, मेरो सिटिजनसिपको निवेदन हाल एप्रुभ गर्न नमिल्ने भनी पेन्डिङमा राखेको छ । पत्रद्वारा मेरो निवेदनको नतिजा पठाइनेछ भनी भनेको छ । मेरो निवेदनमा के कमी कसर भएको हो, बुझ्न सकिन । अब के हुन्छ होला ? यदि मेरो निवेदन अस्वीकृत भए के गर्न सक्छु होला ? उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशामा छु ।
– निमा लामा, ब्रुकलिन, न्यूयोर्क
निमाजी, विभिन्न तरिका वा माध्यमबाट ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकहरुले नेचरलाइजेसनको आधारमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अमेरिकी अध्यागमनको कानूनअनुसार नेचरलाइजेसन भनेको अंग्रेजी, अमेरिकी इतिहास र सरकारसम्बन्धी ज्ञानको परीक्षा मात्र नभई सो निवेदकले कसरी वा कुन आधारमा ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेको हो भन्ने कुराको पनि गहन अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हो । यस अनुसन्धानको सिलसिलामा यदि युएससीआईएसले त्यस निवेदकले उसको ग्रीनकार्ड सही तरिकाले प्राप्त नगरेको वा ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्दाको प्रोसेसमा अनियमितता देखेमा सो ग्रीनकार्ड गैरकानूनी अर्थात् अन ल फुली प्राप्त गरेको भनी ठहर गर्नेछ । त्यस अवस्थामा युएससीआईएसले एन–४०० निवेदन अस्वीकार गर्ने मात्र होइन उक्त निवेदकलाई रिमोभल प्रोसिडिङमा हाली इमिग्रेसन कोर्टमा पनि पठाउन सक्नेछ । अर्थात् डिपोर्टेसनका लागि कारबाही शुरु गर्न सक्नेछ । अब तपाईंको केसमा तपाईं आफैंले एन–४०० निवेदन तयार गरी पेश गर्नुभएकोले त्यस निवेदनमा के त्रुटि हुन गयो भनेर यकिनका साथ भन्न सकिन्न । यदि त्यस्तो गम्भीर त्रुटि नभएको भए र तपाईंले असाइलम र ग्रीनकार्ड सही ढंगले प्राप्त गर्नुभएको भए तपाईंको एन–४०० स्वीकृत हुन सक्छ । यदि तपाईंको एन–४०० निवेदन अस्वीकृत भए ३० दिनभित्रमा अपिल गर्न सक्नुहुनेछ । अपिलको स्थिति आए अनुभवी वकिलको सहयोग लिन सुझाव छ ।